संविधानसभाका कर्मचारी चाहिं के गर्दै होलान् ? | कुवेतको पहिलो नेपाली अनलाईन पत्रिका
← सरकारविरुद्ध १६ दल आन्दोलनमा
सन्नी लियोनलाई निशुल्क सेक्सको प्रस्ताव →
संविधानसभाका कर्मचारी चाहिं के गर्दै होलान् ?
Posted on 01/06/2012 by शिव पौडेल | टिप्पणी छोड्नुहोस्
१९ जेठ, काठमाडौं – संविधानसभा भंग भएपछि धेरै सभासद झोलीगुन्टा बोकेर घरतिर साने सुरसार गर्दैछन् । केही नेतालाई राजनीति गरेर खान पुगेपनि सबैलाई यसले मात्र व्यवहार धान्दैन । संविधानसभाको सदस्य रहँदासम्म महिनामा झण्डै ५० हजारको हाराहारीमा आम्दानी भैरहन्थ्यो । तर संविधानसभा भंग भए लगत्तै यति धेरै आम्दानी हुने मूल स्रोत सुकेको छ । त्यसैले शीर्ष तहका र अरु आम्दानीको स्रोत भएका सभासद बाहेक अरु घरतिर र्फकने सुरमा छन् । एक हिसाबले संविधानसभाका सदस्य जागीर गुमाएको कर्मचारीको अवस्थामा छन् ।
संविधानसभामा सभासदजस्तै त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीको संख्या पनि ठूलो छ । संसद सचिवालयका अनुसार संविधानसभामा काम गर्ने झण्डै दुई सयको हाराहारीमा कर्मचारी छन् । संविधानसभा भंग हुँदैमा कर्मचारीको जागीर जाने त कुरो भएन । तर कामको चाप चाहिं हृवात्तै घटेको छ । ‘हो काम घटेको छ, यसो भन्दैमा हाई गरेरै चाहिं बसेका छैनौं’ संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द ढुंगेलले भन्नुभयो । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद सचिवालयले गरेको कामलाई अद्यावधिक गर्ने र चुस्त तथा दुरुस्त ढंगले अभिलेख राख्ने काम भैरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । ‘अरु दैनिक प्रशासनिक काम पनि नियमित रुपमा भैरहेको छ’ ढुंगेलले भन्नुभयो -’भविष्यको लागि आवश्यक कामको लागि सबै कर्मचारीले नियमित रुपमा काम गरिरहेका छन् ।’
सचिवालयमा नियमित काम गर्ने दुईसय हाराहारीका कर्मचारी सहित केही काजमा पनि खटिएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेका प्राविधिक र अरु कानुनविद सहित सचिवालयले झण्डै दुई दर्जन कर्मचारीलाई काजमा खटाएको थियो । तीमध्ये धेरैजना फिर्ता भैसकेका छन् भने केही फिर्ता हुने तयारीमा छन् ।
बानेश्वरको भवन के गर्ने भन्ने अन्योल
सचिवालयले बानेश्वरमा रहेको हललाई चार वर्षदेखि संविधानसभा भवनको रुपमा भाडामा प्रयोग गर्दै आएको छ । भाडाको लागि यो महिनाभरको सम्झौता छ । तर त्यसपछि फेरि सम्झौता नवीकरण गर्ने या नगर्ने भन्ने’bout सचिवालयले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । ‘हामी सरकार, दल र अरु सरोकारवाला पक्षसित यस’boutमा छलफल गर्दैछौं’ संविधानसभा सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भन्नुभयो । ६ महिनाभित्र चुनाव भएमा फेरि पनि यही हल प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल बानेश्वरबाट नहट्ने सचिवालयको सोचाई छ । चाँडै चुनाव हुने हो भने ६ सय १ कै हाराहारीमा संविधानसभा सदस्य रहने र यतिको संख्या अटाउने हल अन्यत्र नभएकाले पनि सचिवालयले बानेश्वरको भवनलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेको हो । तर चुनाव चाँडो हुन सक्ने या नसक्ने भन्ने अन्योल कायमै रहेकाले केही दिनको राजनीतिक घटनाक्रमलाई बुझेर मात्र आवश्यक निर्णय गर्ने सचिवालयको तयारी छ ।